သားငယ်လေး ချစ်ချစ်တုန် ရဲ့(၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ သားလေးပုံေ လးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုတော င်းပေးလို က်တဲ့ အာဇာနည် – Shwe Likes
ပရိသတ် ကြီးရေ အာဇာနည် ကေ တာ့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့အားေ ပး ချစ်ခင်မှု ကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ် အချစ်တော် အဆိုေ တာ် တစ်ေ ယာက်ပဲဖြစ်ပါတ ယ်။
အာဇာနည်ကတော့ ပျော်ရွှ င်စရာကောင်း လှတဲ့ မိသားစု ဘဝလေး ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စ ရာကောင်းလှတဲ့ သားသား မီးမီးလေးေ တွကိုလည်း ပိုင် ဆိုင်ထားပါတယ်။
ဒီနေ့ ဇန်န ဝါရီလ (၁၁)ရက်ေ န့ မှာတော့ Rဇာနည်က သူရဲ့လူမှုကွန် ရက်စာမျ က်နှာ ကနေ သားငယ်လေးဖြစ်တဲ့ ချစ်ချစ် တုန်လေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွ န်ကောင်းတောင်းေ ပးထား ခဲ့ပါတယ်။
“Happy Birthday. သားလေး ချစ်ချစ် အသက်ရှည် ကျန်း မာချမ်းသာပြီး ဘိုးဘွား မိဘ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် ဆ ရာသမား ကိုကိုမမ များကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းပြီး လိမ္မာရေး ချားရှိတဲ့ သားကောင်း ရတနာလေး ဖြစ်ပါစေဗျာ” လို့ သားလေးရဲ့ ပုံလေးနဲ့အတူ မွေးနေ့ဆုေ တာင်းပေး ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်ချစ်တုန်ေ လးတောင် ဘာလိုလိုနဲ့အသက် (၄)နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီနော်။ ပရိသတ်ကြီးတွေ ထဲက Rဇာနည်တို့ မိသားစုကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးေ တွက Rဇာနည်ရဲ့ သားငယ်လေး ချစ်ချစ်တုန်ရဲ့မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ေ ကာင်းတွေေ တာင်းေ ပးခဲ့ပါဦးနော်။ Source – Zarni Myonyunt
ပရိသတ္ ႀကီးေရ အာဇာနည္ ေက တာ့ ပရိသတ္ေတြ ရဲ့အားေ ပး ခ်စ္ခင္မႈ ကို အျပည့္အဝ ရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္ အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေ တာ္ တစ္ေ ယာက္ပဲျဖစ္ပါတ ယ္။
အာဇာနည္ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊ င္စရာေကာင္း လွတဲ့ မိသားစု ဘဝေလး ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ခ်စ္စ ရာေကာင္းလွတဲ့ သားသား မီးမီးေလးေ တြကိုလည္း ပိုင္ ဆိုင္ထားပါတယ္။
ဒီေန႔ ဇန္န ဝါရီလ (၁၁)ရက္ေ န႔ မွာေတာ့ Rဇာနည္က သူရဲ့လူမႈကြန္ ရက္စာမ် က္ႏွာ ကေန သားငယ္ေလးျဖစ္တဲ့ ခ်စ္ခ်စ္ တုန္ေလးရဲ့ ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြ န္ေကာင္းေတာင္းေ ပးထား ခဲ့ပါတယ္။
“Happy Birthday. သားေလး ခ်စ္ခ်စ္ အသက္ရွည္ က်န္း မာခ်မ္းသာၿပီး ဘိုးဘြား မိဘ ဦးဦးေဒၚေဒၚ ဆ ရာသမား ကိုကိုမမ မ်ားကို ရိုေသကိုင္းရွိုင္းၿပီး လိမၼာေရး ခ်ားရွိတဲ့ သားေကာင္း ရတနာေလး ျဖစ္ပါေစဗ်ာ” လို႔ သားေလးရဲ့ ပုံေလးနဲ႔အတူ ေမြးေန႔ဆုေ တာင္းေပး ထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ခ်စ္ခ်စ္တုန္ေ လးေတာင္ ဘာလိုလိုနဲ့အသက္ (၄)ႏွစ္ျပည့္သြားခဲ့ၿပီေနာ္။ ပရိသတ္ႀကီးေတြ ထဲက Rဇာနည္တို႔ မိသားစုကို ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးေ တြက Rဇာနည္ရဲ့ သားငယ္ေလး ခ်စ္ခ်စ္တုန္ရဲ့ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ေ ကာင္းေတြေ တာင္းေ ပးခဲ့ပါဦးေနာ္။ Source – Zarni Myonyunt
သူမထင်ထားသလို ဇာတ်သိမ်းမလှခဲ့လို့ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက် မကိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပုံကို ပုံနဲ့တကွပြသလာတဲ့ ဆယ်လီမမဆူး
လတ်တလော လူပြောများနေတဲ့ ရေမွန့်မိသားစု ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူအောင်လမှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း